Wasiirka arimaha gudaha waan xooji doonaa Ciidamada xooga dalka | goboladaradio.com	Friday, February 24th, 2017	Home
Wasiirka arimaha gudaha waan xooji doonaa Ciidamada xooga dalka
Published on November 19, 2012 by liibaan · No Comments Nov 19, 2012 Goboladaradio) Wasiirka arimaha gudaha ee dowlada soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in Ciidamad dowlada Soomaaliya ay xooji doonaan isla markaana ay qalabeydoonaan.
Wasiirka oo ka hadlaye xaflada xilwareejintiisa ayaa wuxuu balan qaaday in laamaha kala duwan ee Ciidamada dalka Soomaaliya ay tayey doonaan.
Wasiirka arimaha gudaha C/kariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa uu tilmaamay in dhamaan taliyeyaasha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay wada shaqeyn wanaagsan dhexmari doonto sila markaana ay kawda shaqeydoonaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in talaabada ugu horeysa ee wasaarada arimaha gudaha iyo amniga qaranka ay qabanayso ay tahay sidii korloogu qaadi lahaa tayada ciidamada Dowladda Soomaaliya si ammaanka Gobalka ay uxaqiijiyaan.
Wasiirka cusub ee wasaarada arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee salka Soomaaliya ayaa sheegay in shuruucda ciidamada qalabka sida ay ku shaqeeyaan dib uhabeyn lagu sameyn doono ujeedkana uu yahay xaqiijinta ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay ee hadal ceynkani oo kalaa uu kasoo baxo Wasaarada cusub ee arimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya ayidoona looga fadhiyaa sugidda ammaanka Gobalka Banaadir iyo deegaanada ciidamada Dowladda Soomaaliya ay kala wareegeen Xarakada ai-shabaab.
arar xaqiiqda ku sakeysan kala soco